Sidee looga saaraa codka kaamerada ku jirta Android si sawir looga qaado | Androidsis
Sida looga saaro dhawaaqa kamaradda ee Android marka aad sawiro qaadaneyso
Markii aan sawir ku qaadno kaamirada taleefankeena gacanta ee 'Android', buuq ayaa soo baxa, oo muujinaysa in sawir la qaaday. Waxaa jiri kara waqtiyo aan jeclaan lahayn in dhawaqan la waayo. Sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan sawir ka qaadno meel aan ku habbooneyn ama waqti aan noqon doonin midka ugu habboon. Waxaan ka saari karnaa codka kaamerada, dhowr siyaabood.
Hoos waxaan ku tusi karnaa xulashooyinka aan haysanno si loo xiro kaamerada ku jirta Android. Marka markaad u baxdo inaad sawir la gasho taleefankaaga, wax cod ah oo la soo saari maayo, taas oo ah sida saxda ah waxaan dooneyno kiiskan. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar, oo hubaal ku habboon waxa aad raadineyso.
1 Taleefanka ka aamus
2 Dejinta kamaradaha ku saabsan Android
3 Albaab furan
Taleefanka ka aamus
Hal ikhtiyaar oo u shaqeeya inta badan noocyada ku shaqeeya Android waa in taleefanka laga xiro. Haddii aan codka ka saarno taleefankeenaAdoo ka dhigaya mid aamusan ama birqaya, kaamirada qalabka ma sameyn doonto buuq markii aan sawir la qaadanno. Markaa waa ikhtiyaar aad u fudud oo loo adeegsado kiiska noocan ah.
Warka xun ayaa ah inay tahay wax taas kama shaqeeyo dhammaan noocyada ku shaqeeya Android. Waxaa jira calaamado inkasta oo aaladdu aamusantahay, kamaradu waxay sii wadi doontaa inay soo saarto buuq markii sawir la qaadayo. Sidoo kale haddii aad leedahay taleefanka birqaya tani way dhici doontaa. Marka isticmaaleyaal badan waa hab aan u shaqeyn doonin iyaga.
Sida loogu isticmaalo kamarada taleefankaaga Android kaamirad ahaan
Dejinta kamaradaha ku saabsan Android
Waan awoodnaa miciin si aad u dejiso goobaha kamaradaha telefoonka laftiisa. Mar labaad, tani waa wax aan laga heli karin dhammaan noocyada. Laakiin waxaa jira noocyo taleefanno ah oo ku shaqeeya Android oo kuu oggolaanaya inaad kaamus kaamaradda ka soo baxdo, taas oo aan buuq sameynin marka aad sawirro ka qaadanayso, kaamirada meesheeda u gaarka ah. Waa ikhtiyaar aad u raaxo badan oo fudud oo buuxiya ujeeddada la doonayo kiiskan.
Si tan loo sameeyo, waa inaanu fureynaa codsiyada kamarada iyo ka dib gal setinkeeda. Goobahan waxaan ka heli karnaa qayb la yiraahdo Aamusnaanta. Noocyada qaarkood waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa Mute ama Mute Mute, waxay kuxirantahay lakabka qaabeynta loo isticmaalo. Waxa kaliya ee lagu sameeyo kiiskan ayaa ah in la kiciyo doorashadan. Markaan isticmaaleyno kaamerada, ma sii deyn doonto wax buuq ah.
Markasta oo aan rabno Ikhtiyaarka markale waan joojin karnaa, waa inaan dib ugu noqonaa goobaha kamaradaha. Marka wax dhibaato ah kuma lahaan doontid arrintan marka aad isticmaaleyso shaqadan.
Sida loo nuqul ka sameeyo sawirrada sawirada Google
Haddii taleefankeena Android uusan nasiinin suurtagalnimadaan, waxaan isticmaali karnaa codsiyo dhinac saddexaad ah, taas oo ka dhigaysa arjiga kaamerada inay suurtagal tahay in la aamusnaado Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo ku yaal Dukaanka Play, inkasta oo codsi si fiican u shaqeeya ay fududahay in la isticmaalo waa Kaamirad Furan. Waa codsi kamarad ah oo aan ku rakibi karno taleefankeenna, kaas oo beddeli doona barnaamijka kamaradda ee aan ku haysanno asal ahaan. Waxay na siisaa taxane ah hawlo dheeri ah.
Markii aan ku rakibnay taleefanka, waa inaan galnaa qaababkiisa. Goobaheeda waxaa ku yaal qayb la yiraahdo kontoroolada kamaradaha oo badan, halkaas oo aan ka helno dhowr ikhtiyaar. Mid ka mid ah xulashooyinka ayaa ah in laga saaro dhawaqa santuuqa, kaas oo u oggolaanaya in codka kamaradda la tirtiro markii sawir la qaadanayo. Sidan oo kale, waxaan ku qaadi karnaa sawirro iyada oo kamaraddu aan wax buuq ah samaynaynin mar uun. Aad u fududahay in la isticmaalo arrintan.
Ku soo degsashada Kaamirada Furan ee Android waa lacag la'aan. Intaas waxaa sii dheer, gudaha arjiga wax iibsi ama xayeysiis noocuu doono ha ahaadee, taas oo u oggolaaneysa adeegsi aad u raaxo badan marwalba. Markaa waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan haddii labada midkood ee kale midkoodna uusan siin natiijada laga filayo dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga saaro dhawaaqa kamaradda ee Android marka aad sawiro qaadaneyso
Barnaamijka beta ee loogu talagalay Android 10 ee Galaxy S10 hadda waa la heli karaa
Vivo IQOO Neo 2 ayaa jidka ku soo jiri lahaa